छोरा आरव र छोरी निताराका बाबु अक्षयले खोले परिवार भित्रको गोप्य रहस्य – OSNepal
छोरा आरव र छोरी निताराका बाबु अक्षयले खोले परिवार भित्रको गोप्य रहस्य
Osnepal April 02, 2022 0
अक्षय कुमार र ट्विंकल खन्नाका दुवै सन्तान लाइमलाइटमा बस्न चाहादैनन् । एकपटक अक्षयले भनेका थिए कि उनका छोरा आरवले आफू आफ्नो छोरा हो भनेर कसैलाई भनेनन् । अक्षयले यो कुरा बेयर ग्रिल्सको शोमा भनेका थिए । उनले भनेका थिए– मेरो छोरा एकदमै फरक छ। आरव मेरो छोरा हो भनेर कसैलाई भन्दैनन् । उनी लाइमलाइटबाट टाढा रहन चाहन्छन् ।
उनी आफ्नो पहिचान बनाउन चाहन्छन् । म उसको कुरा बुझ्छु त्यसैले म उसलाई जस्तो बन्न चाहन्छ त्यस्तै हुन दिन्छु । अक्षयले बेयरलाई पनि भने कि उनका बुबा उनको सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा हुन् र उनी आफ्नो नियमहरू पछ्याउँछन्। अक्षयले भने– मेरो जीवनमा मेरो बुबाले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्नुभएको छ र म उहाँको नियम पालना गर्छु ।
मलाई आशा छ कि मेरो छोराले पनि त्यही बाटो पछ्याउँछ। ट्विंकल खन्ना आफ्नो फनी कथनका कारण सधै चर्चामा रहने गर्छिन् । एक पटक उनले एक मजेदार मेम साझा गरेकि थिईन् । यस मेममा ट्विंकल किन पति अक्षय कुमारजस्तै ठूला स्टार होइनन् भन्ने कुरा बताइएको थियो । वास्तवमा, ट्विंकलले सेयर गरेको मेममा क्याप्टेन अमेरिकाले क्रिससँग झगडा गरेको दृश्य थियो।
क्याप्टेन अमेरिकाले अक्षय कुमारकी श्रीमती ट्विंकल खन्नालाई किन ठुलो स्टार नभएको भनेर सोध्छन् । जस पछि जयसपालले सोधे किन ? त्यसैले क्याप्टेन अमेरिका भन्छन्, –ट्विंकल(ट्विंकल लिटिल स्टार । लिटिल भएपछि कसरी ठुलो स्टार हुन सक्छ त ? अक्षय र ट्विंकल दुई सन्तानका अभिभावक हुन् । छोराको नाम आरव र छोरीको नाम नितारा हो ।